चिकित्सा शिक्षा पुनः प्रवेश परीक्षा गर्नु कति जायज, कति हाँस्यास्पद? – Health Post Nepal
२०७८ भदौ २ गते १४:५६
चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक प्रवेश परीक्षाको नतिजा साउन २४ मा प्रकाशन गर्‍यो।
आयोगले निर्धारण गरेको सिटसंख्या भन्दा ६ वटा विषयमा कम विद्यार्थी उर्तिण भए।
जसमा बिएससी नर्सिङ, बिएससी एमएलटी, बिएससी एमआइटी, बिपिटि, बि फार्मा र बिपीएच लगायतका विषयहरू थिए।
प्रवेश परीक्षामा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएकाले विद्यार्थी तनाव थपिने र नेपाली मुद्रा विदेशिने स्थिति बनेको तथा नेपालमा जनशक्ति अभाव हुने भन्दै पाँच विद्यार्थी संगठनले पुन परिक्षाको माग गराउन आयोगलाई अपिल गरे।
पुनः प्रवेश परीक्षा गराउने माग कति उचित?
चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछिको साझा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण नभई कोही पनि वैध रूपमा पढ्न विदेश जान र फर्केर लाइसेन्स लिएर सेवा दिन सम्भव छैन।
साझा प्रवेश परीक्षा मुख्यता गुणस्तर कायम गर्नका लागि नै लिइने त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का पुर्व डीन डा. जगदिश प्रसाद अग्रवाल बताउँछन्।
‘कुनै पनि देशमा सिट संख्या पुगेन भनेर पुन परीक्षा लिने प्रावधान छैन,’ डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘हाम्रो उदेश्य भनेको राम्रो गुणस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्नु नै हो। जसले बजारमा गएर राम्रो सेवा दिन सकोस्।’
उनका अनुसार अदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न त्यसको असर लामो समयसम्म भोग्नुपर्ने हुन्छ।
आयोग मापदण्ड अनुसार अयाेग्य विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने छैइनन्। अर्थात, परीक्षामा अनुर्तिण भएको विद्यार्थीलाई सिट संख्या नपुगेको कारण पुन परीक्षा लिने मापदण्ड छैन।
अबको जोड गुणस्तरमा
आयोगले बिएससी नर्सिङ तर्फ सिट संख्या ११०० तोकेको छ। तर ५०४ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन्।
यस्तैगरी, बिएससी एमएलटी तर्फ सिट संख्या ४२५ मा ११८ जना मात्र पास भएका छन्।
प्रवेश परीक्षाको यो नतिजासँगै स्नातक वा सोभन्दा माथिका कार्यक्रमहरूमा कलेजको सिट नभरिने निश्चित छ।
जसका कारण सिटको मागभन्दा विद्यार्थी संख्या कम भएपछि मोलमोलाइ गरेर सस्तोमा पढाउने सम्भावनाको समेत खुलेको छ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा अनमीसहित झन्डै ९८ हजार नर्सिङ जनशक्तिले सेवा दिन लाइसेन्स पाइसकेका छन्। तर, जसमध्ये ४०
हजारभन्दा बढी बेरोजगार भएको अनुमान गरिएको छ।
रोजगारीमा हुनेमध्ये अधिकांशको श्रम शोषण भइरहेको छ।
देश, जनता, संस्थाको, नियमनकारी निकाय सबैको उदेश्य गुणस्तरको शिक्षा होस् नै भन्ने हुन्छ।
डा. अग्रवालका अनुसार गुणस्तरिय शिक्षामा पाठ्यक्रम शैक्षिक वातावरण, परीक्षा लिने स्टिम, विद्यार्थीको स्थिरियता हो।
‘सिट भर्ने उदेश्यले मात्रै पास गराउने भन्ने कमजोर जनशक्ति बढ्छ,’ डा. अग्रवाल भन्छन्, ‘ जनशक्ति थोरै उत्पादन गरौं। तर, गुणस्तरयुक्त। जसले भोलि जनतालाई राम्रो सेवा दिन सकोस्।’
के – जनशक्ति अभाव हुन्छ त ?
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन ‘२०७२’ अनुसार यही अनुपात मात्रै जनशक्ति उत्पादन ‘एक दशक’ पछि लाखौं जनशक्ति बेरोजगार हुने अवस्था आउँछ।
सन् २०३१ मा अर्थात अरू एक दशकपछि नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको अनुपातमा जनशक्ति र्पुयाउँदा समेत ३५ हजार डाक्टर आवश्यक पर्नेछन्।
तर अहिलेकै अनुपातमा डाक्टर उत्पादन हुँदा यहाँ उपलब्ध डाक्टर संख्या झन्डै ५५ हजार पुग्नेछ। अर्थात देशका सबै कुनामा आवश्यक संख्यामा डाक्टर पठाएर पनि २० हजार भन्दा बढी चिकित्सक अभाव हुने देखिन्छ।
हाल स्वास्थ्य सेवा सहर केन्द्रित मात्रै भएकाले वास्तविक बेरोजगार डाक्टर संख्या झनै ठूलो हुनेछ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार अहिले नै नेपालमा दर्ता भएका चिकित्सकको संख्या २८,४७७ पुगिसकेको छ। हाल एमबिबिएस र बिडिएस गरी बर्सेनि झन्डै २५ सय नयाँ चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन्।
त्यसैगरी, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सको संख्या ९८ हजारभन्दा माथि पुगिसकेको छ। सन् २०३१ मा ७० हजार नर्सको आवश्यकता पर्ने माथेमा कार्यदलले अनुमान लगाएको छ। यही अनुपातमा नर्सिङ जनशक्ति बढ्दै जाने हो भने नेपालमा सन् २०३१ सम्ममा नर्सिङमा लाखौं जनशक्ति बेरोजगार हुने निश्चित नै छ।
के भन्छ आयोग ?
विद्यार्थीहरू शैक्षिक अवस्था कमजोर भएकाले नै कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी बताउँछन्।
आयोगले मापदण्डमा प्रवेश परीक्षामा उर्तीण हुन विषयगतमा कम्तिमा पनि ५० नम्बर ल्याउनपर्ने छ।
‘५० प्रतिशत पनि नल्याएका विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा उतिर्ण हुन योग्य हुँदैनन्,’ डा. गिरीले भने, ‘अहिले उतिर्ण नहुँदैमा योग्य नभएका हो भन्न् मिल्दैन।’
खाली हुने सिटमा के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल तथा निर्णय नभइसकेको डा. गिरीले बताए।
‘पास भएका विद्यार्थीहरू अब भर्ना हुन्छन्। खाली सिटमा के हुन्छ केही निर्णय भएको छैन,’ उनले भने।
साझा प्रवेश परीक्षा
4 thoughts on “चिकित्सा शिक्षा पुनः प्रवेश परीक्षा गर्नु कति जायज, कति हाँस्यास्पद?”
Susma Basnet says:
Yo aayoga lay ctevt bata pass hunay students lai dabawna kojayko xa , ctevt bata padnay students lai +2 ko syllabus bata sodayko ro uniharu ko syllabhus bata 10% matar question sodayko lay diploma students lay 50% layna asafal bhae yo kura dabaer basya xa hami diploma padnAy students aru juna subject ma diploma garya ho tahi subject matar bachelor garna milxa tiasto jani jani ni kina aayog lay yo kura buja pachaeko ho diploma garnay students k garnay??? kunai bato xaen hamro lagii +2 ko question nasodos hami lai hamro diploma ma ni +2 ko bhanda dharai subject imp subject hunxa tahi bata sodos hami padna bata banchit bhaka xaw
Sushma nembang says:
hami lay pass huna ni sakayko xawnaw #diplomapiditstudents
जनक न्यौपाने says:
भाग चुतिया । पढ़न जान्नु छैन ठूला कुरा गरेर हुन्छ । पास हुनेले चै कुन सेलेबस पढ़ेका रहेछन । बिद्यार्थी संगठनको पैसा उठाऊँने ठाऊ बन्द भो । चिकित्सा आयोगले गुणस्तर क़ायम गरेको छ । हग्ने, पाद्ने जो पनि मेडिकलमा बन्द गरेकोमा धन्यवाद ।
सिट खाली छ भन्दैमा ५०% पनि ल्याउन न सक्ने लाई भर्ना लिनु काे कुनै अर्थ छैन। थोरै होस तर राम्रो होस।